Caalamka, 20 February 2017
Isniin 20 February 2017
Warbixin: Xaaladda Wiil Indhaha Looga Riday Belgium
Japan oo ka Hadlay Tijaabada K. Woqooyi
Ra’iisal Wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa sheegay in tijaabada Kuuriyada Woqooyi ay ku samaysay gantaan ay u ridday dhinaca biyaha dalka Japan inay tahay arrin aan loo dulqaadan Karin.
Afghanistan: 8 Askari oo Weerar Lagu Dilay
Saraakiisha Waqooyiga Galbeed ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in qof la tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda Taliban uu dilay ugu yaraan sideed booliis ah, maalmo un kadib markii uu isa soo dhiibay, oo uu boliiska kusoo biiray.
Gabar Soomaaliyeed oo Madax ka ah Ururka Ardeyda Canada
Ururka Isutaga Ardeyda Kanada, Canadian Federation of Student waxaa uu u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda ardey dhigato waxbarashada sare ee Kanada, sida macadyada iyo jaamacadaha.
Weerarkii Masjidka Quebec oo Nin loo Maxkamadeynayo
Booliska magaalada Quebec ee dalka Canada ayaa arday Jaamacadeed oo Faransiis-Canadian ah kusoo oogay dacwado la xiriira weerarkii lagu qaaday masaajid ay leeyihiin Musilmiinta magaaladaasi.
Canada: Masjid la Weeraray oo lagu Dilay 6 Qof
Rag hubeysan ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaalla magaalada Quebec City ee dalka Canada, goor dambe oo axaddii ahayd, halkaasi oo uu ku dileen lix qof, kuna dhaawaceen sideed kale.
Wareysi: Wasiirka Socdaalka Canada Axmed Xuseen
Wasiirka Socdaalka iyo Sinjiyada Kanada, Axmed Dirir Xussen ayaa VOA ugu waramey sida ay Soomaalida iyo sinjiyadaha kale ee Muslimiinta ah ee dhalashada Kanada haysta ay u saameynayso goaanka Madaxweynaha Mareykanka uu uga mabnuucay galintaanka dalkaas.
Mexico oo Dowlada Mareykanka u Gacan-gelisay El Chapo Guzman
Dowlada Mexico ayaa xalay usoo gacan gelisay Dowlada Mareykanka, Joaquin "El Chapo" Guzman oo ah gangistarka ugu weyn ee kooxaha ka ganacsado daroogada ee dalka Mexico.
60 Ku Dhimatay Qarax Ka Dhacay Mali
Koox xagjir ah oo xiriir la leh ururka al-Qaida ayaa sheegatay mas,uuliyada weerar isqarxin ah oo Arbacadi shalay lala eegtay xero milatari oo ku taala waqooyiga dalka Mali, halkaas oo ay ku dinteen ugu yaraan 60 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 115 kale.
Madaxweynaha Shiinaha oo ka Digay Dagaal Ganacsi
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa dowladaha dunida uga digay halista ka iman karta dagaal ganacsi, xilli uu ka hadlay Madasha Dhaqaalaha Adduunka ee magaalada Davos ee dalka Switzerland.
Ninka Lagu Tuhmayo Weerarkii Istanbul oo la Qabtay
Ra’iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa xaqiijiyey in ay ciidamada amniga xireen ninkii la sheegayinuu ka danbeeyey weerarki habeenki curashada sanadkan 2017-ka lagu qaaday goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada Istanbul, halkaas oo ay ku dhinteen 39 qof.